सोनिया ‘युनिक्याम्प मिस नर्स २०७१’ - Enepalese.com
सोनिया ‘युनिक्याम्प मिस नर्स २०७१’
इनेप्लिज २०७१ पुष २१ गते ९:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौ । ‘युनिक्याम्प मिस नर्स नेपाल २०७१’को उपाधि सोनिया आचार्यले जितेकी छन् । ४५ प्रतियोगीलाई पछि पर्दै उनले उपाधि आफ्नो कब्जामा पारेकी हुन् । ‘त्यस्तो कार्य बताउनुस् जुन तपाइले मिस नर्स नेपाल भएर अझ प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्नुहुन्छ । जुन मात्र एउटी नर्स भएर गर्न सहज नहोला ? निणार्यकले सोधेको यो प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिदै आचार्यले उपाधि आफ्नो पोल्टामा परेकी हुन् । उनले शिर्ष उपाधिका साथमा ,नेक्ट मोडल नेपालको एम्बेसडर , ट्रफि, विभिन्न गिफ्ट ह्यम्परका साथै अब्रोड स्टिडिजका लागी स्कलरशिप समेत हात पारिन् ।
शनिबार भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न प्रतियोगितामा आश्रा रजक फष्ट रनर अफ र मिस फोटोजेनिक चुनिदा श्रीदेवी शर्मा सेकेन्डरन अफ र मिस सोसल वर्कर घोषित भइन् । यी दुबैले उपाधिका साथमा बिभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरे । सो प्रतियोगितामा मिस ब्युटिफुल सिवानी मल्ल ,बेष्ट स्माइल श्रेया गजुरेल, बेष्ट क्याटवाक अनिता गुरुङ, बेष्ट पर्सनालिटी श्रृष्टी मानन्धर ,मिस डिसिप्लेन कबिता श्रेष्ठ ,मिस चार्मिक जानकी श्रेष्ठले प्राप्त गरे । त्यसैगरी बेष्ट हेयर कुसुम अधिकारी ,बेष्ट स्क्रिन भुमी श्रेष्ठ ,पब्लिक च्वाई राधिका बोगटी, मोष्ट पपुलर जानकी श्रेष्ठ, मोष्ट बब्ली आस्मिसा पाण्डे, बेष्ट नर्सिङ थिम ड्रेस शर्मिला थापा र बेष्ट फ्रेण्डली ममता थापा भए ।
पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकली सम्मका एकसय भन्दा बढी नसिङ कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत एकहजार बढी युवतीबाट अन्तिम स्पर्धाका लागी ४५ छानिएको थिए । रोजिन शाक्यको कोरियोग्राफिमा सम्पन्न प्रतियोगिताका निर्णायकहरुमा डा.सुभाष प्याकुरेल, चलचित्र निर्देशक कलाकार निर्मल शर्मँ गैडा,डा. अनुपमा कार्की ,मिस्टर नेपाल २०१४ सुरज चिल्वाल ,मिष्टर नेपालको कोरियोग्राफर चादनी लामिछाने ,घनश्याम घिमीरे र ३१ बर्षदेखि नसिङ पेसामा आवद्ध कोपिला श्रेष्ट रहेका थिए ।
नर्सिङ पेशामा आबद्ध युवतीहरुलाई समाजप्रति थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक नेन्स्ट मोडल नेपालका अध्यक्ष रबि धमलाले बताए । उनले आगामी दिनमा पनि यो लगायत यस्ता कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने सुनाए ।
युनिक क्याम्पस स्टडिज अष्ट्रेलियाले प्रायोजन गरेको कार्यक्रमको पहिरन डिजाइनर सम्झनाम घले र राजेश नेपालले तयार पारेका थिए । भने बादल प्रसाई ,आस्था.बि डिआईडीका संदिप क्षेत्री लगायतले कार्यक्रममा सांगीतिक प्रस्तुति राखेका थिए ।